Mytel ၏ First Call Announcement အဖြစ် ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးထံ Video Call ခေါ်ဆို | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
Mytel ၏ First Call Announcement အဖြစ် ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးထံ Video Call ခေါ်ဆို
ဗီယက်နမ်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက်အော်ပရေတာ Mytel ၏ First Call Announcement ကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၂)ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel ၌ ကျင်းပရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်သည်။
(၇၁)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အား ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုကာ ဖွင့်လှစ်သည့် အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဗီယက်နမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich ထံ Mytel ဖြင့် Video Call ဖြင့် ဆက်သွယ်ခေါ်ဆို၍ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားခြင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ညီညီဆွေ၊ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဇော်အေးနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လင်းအောင်တို့အား Video Call ဖြင့် ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ-ဗီယက်နမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel) သည် နိုင်ငံအ၀ှမ်းအော်ပရေတာအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် (Nationwide Telecommunication License) ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ရရှိထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ Viettel Global Investment Joint Stock Company Limited နှင့် မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းပိုင် Star High Company နှင့် MNTH Public Limited တို့သည် Joint Venture Agreement က၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် တစ်နှစ်နှင့် ငါးလအတွင်း လုပ်ငန်းများ စတင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Mytel တွင် မြန်မာဘက်မှ ပုဂ္ဂလိကအများပိုင်အဖွဲ့(၁၁)ဖွဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး အစုရှယ်ယာ (၅၁) ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြည်ပအော်ပရေတာနှစ်ခုဖြစ်သည့် Ooredoo Myanmar Ltd ၊ Telenor Myanmar Ltd နှင့် ပြည်တွင်းအော်ပရေတာများဖြစ်သည့် MPT နှင့် KDDI Summit Global Myanmar Company Limited တို့က ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
Mytel ၏ First Call Announcement အခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong ၊ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်စိုးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။
ဗီယကျနမျဆကျသှယျရေးကုမ်ပဏီနှငျ့ မွနျမာစီးပှားရေးကျောပိုရေးရှငျးတို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသညျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ စတုတ်ထမွောကျအျောပရတော Mytel၏ First Call Announcement ကို ဖဖေျောဝါရီလ (၁၂)ရကျနကေ့ နပွညျေတျောရှိ Kempinski Hotel၌ ကငျြးပရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ တကျရောကျသညျ။
(၇၁)နှဈမွောကျပွညျထောငျစုနအေ့ား ကွိုဆိုဂုဏျပွုကာ ဖှငျ့လှဈသညျ့ အဆိုပါ အခမျးအနားတှငျ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ဗီယကျနမျကာကှယျရေးဝနျကွီး H.E. General Ngo Xuan Lich ထံ Mytel ဖွငျ့ Video Call ဖွငျ့ ဆကျသှယျချေါဆို၍ နှုတျခှနျးဆကျ စကားပွောကွားခွငျး၊ မွောကျပိုငျးတိုငျး စဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျညီညီဆှေ၊ တွိဂံဒသေတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျအောငျဇျောအေးနှငျ့ ကမျးရိုးတနျးဒသေတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျလငျးအောငျတို့အား Video Call ဖွငျ့ ဆကျသှယျချေါဆိုခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မွနျမာ-ဗီယကျနမျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသညျ့ Telecom International Myanmar Company Limited(Mytel) သညျ နိုငျငံအဝှမျးအျောပရတောအဖွဈ လုပျဆောငျနိုငျရနျအတှကျ (Nationwide Telecommunication License) ကို ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ (၁၂) ရကျနတှေ့ငျ ရရှိထားခွငျးဖွဈပွီး ပွညျပဆကျသှယျရေး ကုမ်ပဏီ Viettel Global Investment Joint Stock Company Limited နှငျ့ မွနျမာစီးပှားရေးကျောပိုရေးရှငျးပိုငျ Star High Company နှငျ့ MNTH Public Limited တို့သညျ Joint Venture Agreement က၂၀၁၆ ခုနှဈတှငျ လကျမှတျရေးထိုးနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ တဈနှဈနှငျ့ ငါးလအတှငျး လုပျငနျးမြား စတငျနိုငျခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Mytel တှငျ မွနျမာဘကျမှ ပုဂ်ဂလိကအမြားပိုငျအဖှဲ့(၁၁)ဖှဲ့ ပါဝငျဖှဲ့စညျးထားရှိပွီး အစုရှယျယာ (၅၁) ရာခိုငျနှုနျး ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
လကျရှိတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၌ ပွညျပအျောပရတောနှဈခုဖွဈသညျ့ Ooredoo Myanmar Ltd၊ Telenor Myanmar Ltd နှငျ့ ပွညျတှငျးအျောပရတောမြားဖွဈသညျ့ MPT နှငျ့ KDDI Summit Global Myanmar Company Limited တို့က ဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှု လုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျနကွခွငျေးဖွဈသညျ။
Mytel၏ First Call Announcement အခမျးအနားသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ၊ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးမြားနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Dr. Luan Thuy Duong၊ Telecom International Myanmar Company Limited (Mytel) ဥက်ကဋ်ဌ ဦးခငျမောငျစိုးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား၊ ဖိတျကွားထားသညျ့ ဧညျ့သညျတျောမြား တကျရောကျကွကွောငျး သိရသညျ။